हैजा देखिन थालेको छ, ख्याल गर्नुहोस् : डा. पुन | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
हैजा देखिन थालेको छ, ख्याल गर्नुहोस् : डा. पुन
असार २०, २०७५ बुधबार ९:२७:९ | उज्यालो सहकर्मी
दुषित पानीको प्रयोगका कारण काठमाडौंमा झाडापखाला तथा हैजाका बिरामी देखा परेका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा झाडापखाला, हैजा र ज्वरोका बिरामी धेरै जाने गरेका छन् ।
वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै देखिएको रोग र यसबाट बच्ने उपायबारे विना न्यौपानेले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका विभागीय प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
वर्षा सुरु सुरु हुनेबित्तिकै काठमाडौंमा हैजा रोग देखिन थालेको छ नि ?
हैजा साधारणतया किटाणुयुक्त खाना वा पानीबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ । विकसित देशमा हैजा प्रदुषित खानाका कारणले लाग्ने गर्दछ भने विकासोन्मुख देशहरूमा प्रायःजसो पानीका कारणले यो रोग सर्ने गरेको पाइन्छ । हैजा पहिला वर्षमा साउन महिनामा देखा पर्ने गरेको थियो ।
तर अहिले एक महिना अगाडि नै असार महिनामा देखा पर्यो । यो ५ देखि १० प्रतिशतमा मात्रै कडा खालको देखा पर्ने हुन्छ । कतिपय लक्षण बिहीन अवस्थामा वा सामान्य उपचार गरेर घरमा नै ठिक हुन्छ भनेर बस्नुहुन्छ, उहाँहरुबाट हैजा फैलन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
हैजाको लक्षण कस्तो हुन्छ ?
हैजा लागे पछि चौलनी पानी जस्तो पातलो दिसा हुन्छ । केही दिनसम्म निरन्तर तथा ठूलो मात्रामा पातलो दिसा लाग्ने हुन्छ । बान्ता हुने तथा मांसपेसी बाउँडिने समस्या पनि देखिन सक्छ । हैजाका कारणले लाग्ने पखालाले केही घण्टाभित्रै गम्भीर जलवियोजन तथा इलेक्ट्रोलाइटको असन्तुलन गराउँछ ।
यसका कारण आँखा गढ्ने, छाला चिसो हुने, छालाको लचकतामा कमी आउने तथा हातगोडा चाउरी परेर जाने पनि हुन सक्छ । शरीरमा भएको जलवियोजनका कारण छाला निलो भएर जान सक्छ हैजाको कीटाणु शरीरमा प्रवेश गरेको दुई घण्टादेखि पाँच दिनसम्ममा लक्षणहरू देखिने गर्दछन् । विचार पुर्याइएन भने ज्यानै जान पनि सक्छ ।
के कारणले हुन्छ हैजा ?
हैजा विभिन्न प्रकारका भिब्रियो कलेरा ब्याक्टेरियाका कारणले हुने रोग हो । जसमध्ये केहीले अत्यन्तै कडा खालको रोग लगाउने गर्दछन् । यो रोग प्रायः भिब्रियो कलेरा ब्याक्टेरिया भएको दिसाको सम्पर्कमा आएको पानी तथा खानाका कारण सर्ने गर्दछ ।
मुख्यतया सरसफाईको अभावका कारण हैजा लागेको मानिसको दिसा मिसिएर प्रदुषित भएको खाना वा पानीबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ । राम्रोसँग नपाकेको खानाले पनि हैजा निम्त्याउने गर्छ । संक्रमित पानी वा राम्रोसँग हात नधोएर त्यो किटाणु खाने कुरामा आइपुग्यो भने हैजा लाग्छ ।
घरमा एकजनालाई हैजा लाग्यो भने अरुलाइ सर्ने संभावना कत्तिको हुन्छ ?
छुँदैमा सर्ने रोग होइन, तर केही गरेर त्यो बिरामीले राम्रोसँग हात धोएन भने उसको दिसाको किटाणु खानामा या पानीमा मिसियो भने अवश्य पनि लाग्छ । मान्छेबाट सर्ने भन्दा पनि एउटा जारको पानीमा किटाणु रहेछ भने त्यो पानी घरको सबैले पिउँछन्, अनि लाग्ने संभावना हुन्छ । तर कडा खालको सबैमा हुँदैन ।
एउटै खाना खाएर पनि कसैलाई हुने, कसैलाई नहुने हुन्छ । किनकी सबैको शरीरको बनोट एउटै खालको हँुदैन । कसैको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति धेरै हुन्छ, भने कसैमा थोरै हुन्छ । त्यसले पनि फरक पार्छ । त्यस्तै दीर्घ रोगले पनि प्रभाव पार्छ । विभिन्न कारणले गर्दा कसैलाई कडा, कसैलाई नरम खालको देखा पर्छ । कसैलाई त अझै लक्षण नै देखा पर्दैन ।
हैजा लागेको थाहा भएपछि के गर्ने ?
हैजा नै लागेको हो भन्ने थाहा भैसकेपछि घरमा बस्नुभन्दा अस्पताल नै गएको राम्रो । त्यसमा सामान्य अदृश्य खालकोदेखि कडा खालको समेत हुन्छ । सामान्य खालको छ भने त जीवनजल खाएर पनि धेरै हदसम्म फाईदा लिन सकिन्छ ।
डिहाईड्रेसन, सम डिहाईड्रेसन र सिभिएड डिहाईड्रेसन भन्ने हुन्छ । नेपालमा सिभिएड डिहाईड्रेसन भएर मात्रै अस्पताल आउने हुन्छ । नो डिहाईड्रेसन, सम डिहाईड्रेसनमा आउँदैनन् । त्यो भनेको गढ्ने, मुख सुक्ने, छाला चिसो र ओसिलो हुने, छालाको चमकमा कमी आउने वा हातगोडा चाउरी पर्ने, पानी धेरै पिउँदा पनि पिसाबको मात्रा घट्दै जाने सँगै बान्ता पनि भयो भने यो कडाखालको हो । यस्तो अवस्थामा घरमा बस्नु हुँदैन । तर सामान्य खालको हो भने घरमा नै बसेर झोलिलो खानेकुरा जीवनजल खाँदा पनि हुन्छ ।
हैजाको रोकथामचाहिँ कसरी गर्ने ?
सबैभन्दा पहिले त पानी शुद्द, सफा र सुरक्षित हुनु पर्याे । त्यसको लागि पानी निर्मलिकरण गर्नुपर्छ । फिल्टर गर्ने, पियुष, वाटरगार्डको प्रयोग तथा उमालेर पनि पिउन सकिन्छ । तर पछिल्लो समय हाम्रो जीवनस्तर परिवर्तन आएको छ । धेरैजनाले जारको पानी घरघरमा ल्याएर पिउने गर्नुहुन्छ ।
अहिले झाडापखाला र हैजाका बिरामी बढेका छन्, त्यसैले किनेर ल्याएको पानीमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । हामै्र धारामा आउने पानीमा पनि आउन सक्छ । फिल्टरको प्रयोग गरेको छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन र सम्बन्धित नियाकायले पनि अनुगमन गरेको छैन् ।
फिल्टर आफैमा पनि विभिन्न तहका फरक फरक हुन्छन् । त्यसैले पानी उमालेर पिउँदा नै उपयुक्त हुन्छ । पानी उमालेपछि त्यसमा भएका किटाणुहरु नष्ट हुन्छन् । हैजाले मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्ने भए पनि उपयुक्त सरसफाइका विधि अपनाउन सकेमा यसबाट सजिलै बच्न सकिन्छ ।
अन्तिम अपडेट: चैत २३, २०७५
​आईपीएल क्रिकेट : दिल्लीको प्रदर्शनले तीन टिमलाई प्रभाव पार्ने
मणिपाल खुलाउन मुख्यमन्त्री गुरुङको निर्देशन
आफ्नाे उमेर समूहभन्दा फरक तरिकाकाे भूमिकामा बलिउडका स्टार कल...
सरकार र राप्रपाबीच वार्ता, गणतन्त्रमाथि नै अतिक्रमित हुने खाल...
इस्लामिक स्टेटले लियो श्रीलङ्कामा भएको आक्रमणको जिम्मा
सप्तरीमा भएका छुट्टाछुट्टै घटनामा दुई जनाको ज्यान गयाे
सुटिङमा सुस्मिता नेपालको राष्ट्रिय कीर्तिमान
जिल्लामा पहिलो पटक विद्यालय बस: विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु पर्दैन
बेरोजगार व्यक्ति र कामको विवरण दिन स्थानीय तहलाई केन्द्रको अनुरोध
पब्जीको लत छ ? कसरी छुटाउने ?
एसएस राजामौलीको चलचित्र ‘आर आर आर’ मा श्रद्धा कपूर नखेल्ने
निर्मला पन्त हत्याकाण्ड : ९ महिना पूरा, स्थानीयद्वारा हत्यारा पत्...
पासाङ ल्हामु शेर्पा साहस र प्रेरणाकी स्रोत: प्रम ओली
गोरखा भूकम्प : क्षति र प्रगति तथ्याङ्कमा
साउदीमा समस्यामा परेकी कमलालाई दूतावासले नेपाल फर्कायो
फेरि विद्रोह गर्ने भ्रम नपाल्न सबैलाई प्रचण्डकाे आग्रह
श्रीलंकामा शृङ्खलाबद्ध विस्फोट : २०७ जनाको मृत्यु, निसानामा होटल र चर्च